यस्तो छ बेल्जियमको प्रारम्भिक विश्वकप टोली
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, काठमाडौं । बेल्जियमले रुस विश्वकप फुटबलका लागि प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ । फिफा विश्व वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको बेल्जियमले सोमबार २८ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकपका लागि स्पेनको टोली घोषणा, को परे को परेनन् ?
२०७५ जेठ ८ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकपका लागि स्पेनले २३ सदस्यीय विश्वकप टोलीको घोषणा गरेको छ । टोलीमा सोचिएका दुई अनुभवी र नियमित खेलाडी विश्वकपमा समेटिन सकेनन् । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकपका चार खेल खेलिने मोर्डोभिया एरेनाको यस्तो छ जान्नैपर्ने विशेषता
२०७५ जेठ ७ सोमबार, काठमाडौं । रुसमा सन् २०१८ विश्वकप सुरु हुने तयारी भइरहेको छ । यो खेलका लागि विश्वभरका मानिसहरुले टिकट काट्न पनि सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा रसियाको सबैभन्दा सानो सहरको मोर्डोभा एरेनाको यस्तो विशेषताहरु रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
फ्रान्सलाई विश्वकप जित्ने सुनौलो अवसर
२०७५ जेठ ६ आइतबार, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाका प्रशिक्षक बर्ट भान मार्विकले यसपटक फ्रान्सलाई विश्वकप जित्ने सुनौलो अवसर रहेको बताएका छन् । यस पटकको विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै अनुभव भएका प्रशिक्षकहरुमध्येका एक मार्विकले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
जर्मनी विश्वकपका दुई खेलाडी ओजिल र इल्के विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपतिलाई गुहार
२०७५ जेठ ६ आइतबार, काठमाडौं । दुई जर्मन फुटबलरहरुले विवादमा फसेपछि जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क–वाल्टर स्टाइनमेयरसँग भेट गरेका छन् । टर्की मूलका मेसुट ओजिल र इल्के गुन्डोर्अनले शनिबार जर्मन राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप २०१८ गुमाउने ठुला खेलाडीहरु
२०७५ जेठ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप नजिकिँदै गएसँगै यो विश्वकपमा कुन देशले कस्तो प्रदर्शन गर्ला भन्ने चर्चाका साथै कुन खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रहला भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । अबको एक महिनाभन्दा पनि कम समयमा सुरु हुन गइरहेको यो विश्वकप प्रतियोगितामा केही चर्चित खेलाडीहरु भने खेल्न नपाउने भएका छन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो छ साउदी अरेबियाको विश्वकप खेल्ने टोली
२०७५ जेठ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । साउदी अरेबियाले विश्वकप फुटबल खेल्ने प्रारम्भिक खेलाडीहरुको छनोट गरेको छ । साउदी अरेबियाले अबको बन्द प्रशिक्षण र मैत्रीपूर्ण खेलहरुका लागि २८ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो । ... बाँकी अंश»
सेनेगलबाट रुस विश्वकप खेल्ने प्रारम्भिक टोली
२०७५ जेठ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । सेनेगलले यस पटकको विश्वकप फुटबलका लागि प्रारम्भिक खेलाडी छनोट गरेको छ । टोलीका प्रशिक्षक एलिओउ किसेले विहीबार आफ्नो प्रारम्भिक टोलीको छनोट गरेका हुन् । सेनेगलको टोलीमा लिभरपुलका स्टार स्याडियो म्याने र नापोलीका सेन्टर ब्याक कालिडोउ कोउलिबेली प्रमुख खेलाडीको रुपमा रहने छन् । ... बाँकी अंश»
मोरोक्कोको विश्वकप खेल्ने प्रारम्भिक टोलीको घोषणा
२०७५ जेठ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । मोरोक्कोले रुस विश्वकप फुटबल २०१८ मा खेल्ने खेलाडीहरुको प्रारम्भिक छनोट गरेको छ । विहिबार मोरोक्कोले २३ खेलाडीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकपको त्यो गोल जुन अहिलेसम्मकै सर्वश्रेष्ठ, भिडियोसहित
२०७५ जेठ ४ शुक्रबार, काठमाडौं । सन् १९३० देखि भइरहेको विश्वकप फुटबलमा थुप्रै गोल भए । तर त्यसमा एउटा गोल अविश्मरणीय रहेको छ । त्यो हो अर्जेन्टाइन स्टार डिएगो म्याराडोनाको गोल । ... बाँकी अंश»
आयो रुस विश्वकप –२०१८, यस्तो छ विश्वकप फुटबलको इतिहास
२०७५ जेठ ३ बिहिबार, काठमाडौं । जुन १४ बाट रुसमा विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबल सुरु हुँदैछ । यो विश्वकपको इतिहासमा हुन गइरहेको २१ औं विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हो । विश्वकप फुटबल सन् १९३० मा सुरु भएको थियो । ... बाँकी अंश»
मेस्सी र टिमलाई रुसका सुन्दरीहरु आकर्षित गर्ने तरिका सिकाईंदै !
२०७५ जेठ २ बुधबार, एजेन्सी। विश्वकप फुटबल २०१८ भन्दा अगाडी सबै टोलीहरु आफ्ना खेलाडीहरुलाई उत्साहित बनाउन लागि परेका छन्। त्यसैक्रममा अर्जेन्टिना फुटबलले खेलाडीहरुलाई रुसका सुन्दरीहरुलाई कसरि आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर कक्षा लिएको छ। ... बाँकी अंश»
जर्मनीले गर्‍यो विश्वकपको प्रारम्भिक टोलीको घोषणा, को को परे ?
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप २०१४ को विजेता टोली जर्मनीले पनि रुस विश्वकपको लागि प्रारम्भिक टोलीको छनोट गरेको छ । जर्मनीले २७ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो । अहिले घोषणा गरिएको टोलीमा गोलकिपर म्यानुअन नोयर अटाएका छन् । गएको सेप्टेम्बर महिनायता उनको खासै चर्चा नभएको भए पनि टोलीमा उनलाई समावेश गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
रोनाल्डोको विश्वकप टोलीबाट रेनाटो साञ्चेज बाहिरिए
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । सन् २०१६ को युरोकपका महत्वपूर्ण युवा खेलाडी रेनाटो साञ्चेज रुस विश्वकप फुटबलभन्दा बाहिर रहने भएका छन् । सोमबार भएको पोर्चुगलको प्रारम्भिक खेलाडी छनोटमा उनी पर्न नसकेका हुन् । ... बाँकी अंश»
रुस विश्वकप फुटबलः एल्भासको स्थानमा फाग्नर
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबल आउन अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा रुसमा हुने यो प्रतियोगिताको लागि खेलाडी छनोटको क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । यसैबीच छ पटकको विजेता ब्राजिलले पनि आफ्ना खेलाडीहरु छनोट गरेको छ । ... बाँकी अंश»
चेयरम्यान बने डिएगो म्याराडोना
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । चर्चित फुटबल स्टार डिएगो म्याराडोना बेलारुसको फुटबल क्लव डाइनामो बे्रष्टका चेयरम्यान भएका छन् । उनलाई क्लवले प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबल: ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको प्रारम्भिक टोली घोषित (नामावली)
२०७५ जेठ १ मंगलबार, एजेन्सी। रसियामा हुने विश्वकप फुटबलकालागि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले आफ्नो प्रारम्भीक टोलीको घोषणा गरेको छ। यो प्रारम्भीक मात्र भएको र अन्तिम नामावली जुन ४मा फिफाले गर्नेछ। ... बाँकी अंश»